पुर्ब विद्यार्थीको चिट्ठी क्याम्पसका शिक्षकलाई ! – Nirantarkhabar
पुर्ब विद्यार्थीको चिट्ठी क्याम्पसका शिक्षकलाई !
तोया रेग्मी ।
सुन्दरहरैचा, सुकुना बहुमुखी क्याम्पस सुन्दरहरैँचा मोरङको एक पब्लिक क्याम्पसको रुपमा स्थापित नमुना क्याम्पस भएको र रहेकोमा हामी गौरब गर्छौँ । क्याम्पस स्थापना कालदेखि हालसम्म यो अबस्थामा ल्याइपुर्याउने आम अभिभावक,बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, विद्यार्थी तथा प्राध्यापकहरुमा म हृदयदेखि नमन गर्न चाहान्छु ।
अब कुरा रहयो गत फागुन २० गते कान्तिपुरमा छापिएको समाचार । मैले त्यसलाई गहिरिएर पढेँ स्रोत श्री सन्तोष बराल र श्री लक्ष्मी कुमार श्रेष्ठ हेरेँ । किन र के भएछभन्ने चासो बढ्दै गयो । यसै क्रममा सुकुना क्याम्पसका विदयार्थीका ६ सुत्रीय मागमा शिक्षकले दोहोरो सुबिधा नलिन आग्रह पनि गरिएको थियो । गतिशील क्रमसगैँ माग राख्ने विद्यार्थीमाथि किन र कसरी साङ्घातिक आक्रमण भयो? यो दुखको कुरा हो । कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाप्रति सुसुचित हुने अधिकार सब कोहीलाई हुनु पर्ने हो र पर्दछ । यो किन हुन सकेन ?
म आफू पनि त्यस क्याम्पसको पूर्व विद्यार्थी भएको नाताले त्यहाँ अध्यापनरत आदरणीय गुरु वर्गले फेसबुकमा पोस्ट गरेका लेखहरु निरन्तर अध्ययन गरिरकोछु । मलाई लाग्छ ज जसका लेख पढेँ म सम्मानकासाथ केही भन्न चाहान्छु ।
दोहोरो सुबिधा कहीँ कतै लिन मिल्दैन र त्यहाँ पनि त्यस्तो नहोस । तर कुनै पनि विद्यालयमा अध्यापनरत स्थायी शिक्षक वा प्रधानध्यापक त्यहाँ कसरी सुकुना क्याम्पस प्रमुख , विभागीय प्रमुख हुन सक्छन ? यो चासोको विषय अबस्य बन्यो । हो क्याम्पस बिहानी वा बेलुकी सत्रमा १०–४ बाहेक सन्चालन थियो भने आंशिक शिक्षकका बारेमा यो प्रश्न आउने नै थिएन । त्यहां त बिहान ६ बजे देखि बेलुका ७ बजे सम्म क्याम्पस ३ सत्रमा चलि रहन्छ ,अनि १०–४ स्कुल पनि चल्छ, त्यो कसरी सम्भब छ ? के यहाँ ३ जना क्याम्पस प्रमुख प्रत्येकमा ३÷३ जना बिभागीय प्रमुख छन ? १०–४ बजेसम्म स्कुल र क्याम्पसको जिम्मेवार पदमा रहेर काम गर्न सम्भब छ अनि मिल्छ ? गलत टिप्पणी न उठोस सरकारी सेवामा दिइएको समय बाहेक बिभागीय अनुमती लिएर आंशिक शिक्षक हुन पाउनु पर्ने कुरामा दुविधा नहोला । तर त्यहाँ सरकारी सेवामा स्थायी सुबिधा उपभोग गरिरहेका आदरणीय मित्रहरु क्याम्पस प्रमुख र बिभागीय प्रमुख भएर उहीँ समयमा पुन सेवा सुबिधा लिइरहनु भएको छ । त्यस्लाई दोहोरो सुबिधा नभनेर के भन्ने ?
आदरणीय विद्वानहरुको विद्धतालाई कदर गर्दै पुर्ण सम्मानका साथमा भन्न चाहान्छु । सामुदायिक विद्यालयका तत् तत् तहमा स्थायी सेवा गरिरहेका हामीहरुको मूल पेसा र पहिचान के हो ? कार्यथलो कुन हो ? यो बुझ्नु जरुरी छ । कुनै रिस रागले होइन यहाँहरुको लेखलाई नै उधृत गरेको छु । एउटा शिक्षकले घाँस काट्न नपाइने, खेती किसान गर्न नपाइने,? हो पाइन्छ तर एउटा प्रा वि, नि मावी वा मा वि शिक्षकले उपप्राध्यापक लेखेर उहीँ समयम २ ठाउँ काम गर्न पाइन्न । अनि फेरि विद्यालयमा उपप्राध्यापक पद पनि भएजस्तो लाग्दैन र पदीय मर्यदा र सरकारी सिँदुर पहिरिरहेको पद पनि बिर्सन हुदैन ।
म र म जस्ता तमाम मित्रहरु विद्यालय समय बाहेक अन्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ । कतिले ठूलो पद पनि पाएका छौँ तर सामाजिक सन्जाल वा औपचारिक परिचयात्मक कार्यक्रममा हामी शिक्षक भनेर चिनिन्छौँ । फेरि अर्को कुरा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका कर्मचारी वा सो सरहका शिक्षकलाई इङ्गीत गरि मेरो क्याम्पसमा स्विपरको पद खाली छ ,नियुक्ती लिन सक्नु हुन्छ भनेर प्राध्यापक मित्रले लेख्नु भा छ । म भ्रममा छु कि विद्वानको कलम चिप्लियो त्यो कलम र मसीको अवमुल्यन भएन ?
अनि फेरी भनिएको छ । क्याम्पसको स्थापना हुदा यी जन्मिएकै थिएनन यिननलाई के थाहा ! त्यसो भए नेपालको एकीकरण गरेका पृथ्वी नारायण साहलाई मात्र नेपालको बारेमा थाह होला आज देश उनी र उनका सन्तानले मात्र चलाउनु पर्ने होइन ? अनि राणाले यत्रो सिंहदरबार बनाए सति प्रथा अन्त्य गरे त्रीचन्द्र कलेजको स्थापना गरे ,सुरुमा बिजुली निकाले, शिक्षाको सुरुवात गरे, के बिगारे ? किन ल्याएको प्रजातन्त्र ? त्यसैले विद्वानको कलमले सही निशानी तय गरोस ।
सत्य तथ्यको खोजी गरि सही निकास निकालोस ,जनतालाई सधैँ गुम्रामा नराखोस , त्यस क्याम्पसमा पनि प्रजातन्त्रको अनुभूति सबैले गर्न पाउने वातावरण सृजना गरि क्याम्पसको सम्वृद्धिमा जुटोस, यसमा सबैको साथसहयोग रहने छ । गलत काम गरि धेरै दिन छोप्न त्यति सजिलो छैन यो सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
लेखक तोया रेग्मी सुकुना बहुमुखी क्याम्पसका पुर्व विधार्थी हुनुहुन्छ ।
मोरङमा चट्याङले बालिकाको ज्यान गयो
हावाहुरी पिडितलाई बेलबारीको राहत